Ugbu a ị nwere ike ịgbalite bọtịnụ ọhụrụ "Gosi arụnyere" na Play Store | Androidsis
Un bọtịnụ ọhụrụ dị na Play Store. Mmelite ọhụrụ a na-abịa mgbe ụbọchị nke ọ na-apụta maka ndị ọrụ dị iche iche, n'ụzọ ahụ nke nwere nnukwu G nke ibuga ụdị ọhụrụ ma ọ bụ mmelite ndị ahụ site na sava ahụ. Ụlọ ahịa Play enwetara obere akụkọ n'ime ọnwa ole na ole gara aga, ma ọ bụghị nke ka ukwuu nke anyị na-atụ anya mgbe ụfọdụ.
Ka oge na-aga, ọ nwere ikike iwepu ngwa ndị o nweburu na nsonaazụ ma ọ bụ ndepụta ndị pụtara na Storelọ Ahịa Play. Ma ọ bụ ugbu a mgbe ọ dị ka Google emechaala wepụta atụmatụ nke ọma n'ikwe ka ịme ka nhọrọ ahụ rụọ ọrụ «Gosi arụnyere»N'elu nke ọ bụla n'ime ndepụta ngwa kachasị elu na ihe ndị ọzọ.
N'ụzọ dị otú a, mgbe imepere Play Store maka oge mbụ iji lelee ntakịrị ọhụrụ a, ị ga-enwe ike ịchọta a. bọtịnụ na-ekwu "Gosi arụnyere". Mgbe arụnyere ya, ngwa niile ị rụnyere na ekwentị gị ga-apụta na listi ebe ị nọ.
Nhọrọ ọhụrụ a enweghị ike itinye na nchọta, mana ee nke ahụ na listi ngwa ọ bụla dị na Storelọ Ahịa Play. E tinyekwala obere ihe ọhụrụ maka ndepụta ndị a, ọ bụ ezie na ọ ka nke ọma na akụkụ a na-ahụ anya nke interface ahụ. Ihe ngosi nke gụnyere ịpị ma ọ bụ ịgbalite bọtịnụ ọhụrụ ahụ bụkwa ihe pụrụ iche, ọ na-egosikwa otú asụsụ Nhazi ihe dị elu ugbu a, nke wetara ọtụtụ mgbanwe dị mma na gam akporo.
Emeela mmelite a site na ihe nkesa, yabụ ị kwesịrị ịnwe ya ugbua mgbe ị mepee ụlọ ahịa Google Play na ngwaọrụ gam akporo gị ọzọ. Cheta na ọ dị na ndepụta nke ngwa na egwuregwu kachasị mma, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ngwa ngwa ebe ha nọ, mee ka ọ rụọ ọrụ na ị ga-enwe ozi na ọnọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Playlọ Ahịa Google ugbu a na-egosi bọtịnụ ọhụrụ iji gosipụta ngwa arụnyere
Android gallery lightweight ọtọ na n'elu ihe niile free na-enweghị mgbasa ozi!